चैत १०, २०७६ | राजेन्द्र दाहाल
घन्टौंपछि फ्रायड र पत्नी घर जान भनेर उठ्छन् । बच्चा हेर्छन्, कतै देख्दैनन् । पत्नी आत्तिन्छिन् । तर फ्रायड निश्चिन्त जस्तो देखिन्छन् । श्रीमतीले अलिक झ्र्किएर सोध्छिन्, “तपाईं किन केही बोल्नुहुन्न ? कहाँ गयो होला छोरा ?”
फ्रायडले शान्त स्वरमा पत्नीलाई सम्झउँछन् “धेरै नआत्तेउ न ! यतै कतै गएको होला, भेटिइहालिन्छ नि ! बरु, तिमीले उसलाई कुनै ठाउँमा नजान भनेकी थियौ ?”